နေ့စွဲ : 2021-01-12
အမည် : Editor Bae
လတ်တလော ကျော်ြကားသောအရာများ : 39
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါနော် Editor Bae က ဒီတစ်ခေါက် Body ကို ကြည်လင်ဖြူဝင်း အဆီကျပြီး Hour Glass Shape လေးဖြစ်စေမယ့် New Product လေးတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင့်
Tae Jaeng Yi Peeling Gel 23,000ks > 16,900ks
Skingoa Hot Slimming Cream 36,000ks
တစ်ချက်တည်းပွတ်လိုက်ရုံနဲ့ ဖြူဝင်းကြည်လင်သွားမယ့် Tae Jaeng Yi Peeling Gel
Bae ကိုယ်တိုင် နာမည်ကြီးတဲ့ Body Scrub တွေသုံးပြီး ၁ ဘူးကုန်လည်း မသိသာလို့ ငွေကုန် လူပန်းဖြစ်ရတာကြောင့် Body ကို exfoliating ကောင်းကောင်းလုပ်ပေးနိုင်ပြီး ၁ ခါသုံးရုံနဲ့ သိသိသာသာ ကြည်လင်ပြီး ဖြူဝင်းစေနိုင်တဲ့ Tae Jaeng Yi Peeling gel လေးကို စမ်းသုံး ကြည့်ဖို့ Recommend ပေးချင်ပါတယ် ~
Face ပါ သုံးလို့ရလို့ budget saving ဖြစ်တဲ့အပြင် Lavender နဲ့ Rose ဆိုပြီး အနံ့ ၂ မျိုးထွက်ပါတယ် ~ Bae ကတော့ Spa သွားသလို စိတ်ကို လန်းဆန်းစေပြီး သုံးပြီးတဲ့ ချိန်မှာလည်း အေးအေးလေးနဲ့ နေလို့ကောင်းတဲ့ အချက်လေးကို ကြွေပါတယ် ~ အသားအရည်ကို ထိခိုက်စေတဲ့ Chemical မပါဝင်တဲ့အပြင် scrub တွေလို ကြမ်းကြမ်းတိုက်မိရင်လည်း အသားအရည်ထိခိုက်မှု မရှိပါဘူးနော် ~ ဆောင်းရာသီမှာ အရေပြားခြောက်ပြီး အဖြူအဖတ်ဖြစ်တာတွေ ခြေဖဝါးကွဲတာတွေကအစ သုံးပေးလို့ရပါတယ် ~
ပုံမှန်သုံးပေးရင် အမဲစက် အသားအရည်ခြောက်ပြီး မညီမညာဖြစ်တာ နေလောင်တာတွေ ပျောက်ပြီး ဖြူဝင်ကြည်လင် glow စေမှာ ဖြစ်ပါတယ် ~ Bae တောင် ၁ ခါသုံးကြည့်ပြီး "Woww အဲ့လောက်တောင် သိသာတာလား?? နေလို့လည်း ကောင်းချက်ပဲ" ဖြစ်သွားစေတဲ့ product လေးမို့ လောလောဆယ် Body Scrub ဝယ်ဖို့ စဥ်းစားထားရင် try ကြည့်ဖို့ ပြောချင်ပါတယ်
အသုံးပြုပုံ - ရေချိုးပြီးနောက် Tower နဲ့ ခြောက်အောင် သုတ်ပြီး peeling gel လေးလိုသလောက် ယူပြီး မျက်နှာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ် မှာ massage လုပ်ပြီး ပွတ်ပေးရုံနဲ့ Dead cells တွေ အလိပ်လိုက် ထွက်လာရင် ရေဆေးချပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ~
နောက်ပြီးတော့ 2020 မှာ Body goal လေး မရလိုက်လို့ စိတ်ညစ်နေရင် ခုချက်ချင်းပဲ Skingoa Hot Slimming Cream လေးကို try ကြည့်လိုက်ပါနော်
Hour Glass Shape လေးနဲ့ ဘာပဲဝတ်ဝတ်ကြည့်ကောင်း လှပဖို့အတွက် အားကစားလည်း လုပ်ရင်း ဒီ သဘာဝကရတဲ့ natural essential oil & vitamin c တွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ Skingoa Hot Slimming Cream ကိုပဲ လိမ်းပေးမယ်ဆိုရင် ၂၀၂၀ မကုန်ခင် အဆီပိုမရှိတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေး ရနိုင်သေးတယ်နော် သဲတို့ရေ ~
ဒီ Hot Slimming Cream လေးက လိမ်းလိုက်ရင် ပူနွေးပြီး အရေပြားကိုလည်း တင်းတင်းရင်းရင်းဖြစ်စေတဲ့အပြင် အစိုဓာတ်ကိုလည်းထိန်းပေးပါတယ်~ အဆီကျပြီး smooth ဖြစ်တဲ့ body line လေး ဖန်တီးလိုက်ပါနော်
အိမ်မှာပဲ သုံးနိုင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ Spa တွေမှာပါ သုံးတဲ့ product လေးဖြစ်ပြီးတော့ Thermo Massage လိုမျိုး ဝိတ်ကျစေတဲ့ Treatment တွေအတွက်ပါ သုံးပေးနိုင်တဲ့ Cream လေးပါနော် ~
Workout မလုပ်ခင်လိမ်းမယ်ဆိုရင် ပိုထိရောက်တာကို တွေ့ရပြီး ဒီ cream ကိုလိမ်းပြီး မိနစ် ၃၀ လောက် wrapping လုပ်ထားပေးမယ်ဆိုရင်လည်း cellulite တွေကိုပါ သက်သာစေပါတယ် ~ ကိုရီးယားက ကောင်မလေးတွေကတော့ ဒီ cream လေးကို အပေါ်က ပြောသွားတဲ့ နည်းတွေနဲ့ပါ သုံးကြည့်ပြီး Slim body လေးတွေ ရအောင် ထိန်းသိမ်းနေပါပြီ ယူတို့ရော
အသုံးပြုပုံ - လိုအပ်တဲ့ ပမာဏကို ယူပြီး အဆီပိုစုနေတဲ့ နေရာမှာ စိမ့်ဝင်အောင် လိမ်းပေးရုံပဲနော်
Online Mall - www.sskbeauty.com
အသေးစိတ်ကို သိချင်ရင် အချိန်မရွေး FB messenger ကနေ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်နော်
Shop.com onlinemall : https://www.shop.com.mm/shop/starsecret-korea/...
RGO47 onlinemall :
Spree.com.mm onlinemall :
Tomato.com.mm onlinemall :
A-226, Level 2, Times Mall, Times City, Kamayut Tsp, Yangon.
1st Floor , Hledan Center , Kamayut Tsp, Yangon.
City Mall Counter
Ground floor, St.John City Mall, Lanmadaw Tsp, Yangon.
Customer Service : 09403784845
လက်ကားဝယ်လိုသူများ ဖုန်းနံပါတ် 09403784845, 09784692070 သို့ ဖုန်း သို့မဟုတ် viber ဖြင့် ဆက်သွယ်၍ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။